Waxyaabaha Keena Dhabar Xanuunka iyo side loo daweeya | shumis.net
Home » galmada » Waxyaabaha Keena Dhabar Xanuunka iyo side loo daweeya
Dhabar xanuunku ma ahan jirro ama xanuun ee waa astaan ay yeelan karaan xannuuno badan oo kala gadisan. Caadi ahaan dhabar xanuunku wuxuu tilmaamayaa dhibaato ka jirta seedaha, muruqaha, dareemaysha iyo lafaha sameeya laf dhabarka,
sidoo kale waxay caalaamad u tahay mararka qaar xanuun ku dhaca xubnaha sida kilyaha ama sambabaha iyo xubnaha u dhowba.
Qeybta hoose ee dhabarka waa meesha ugu badan ee dadka qaba dhabar xanuun ay ka sheegtaan, dhabarka waxa uu ka koobanyahay murqo, seedo, xidido, lafo iyo neerfo.
hadii qaybaha uu ka koobanyahay dhabarku soo gaarto ama lasoo daristo xaalad caafimaad waxaa imaanaya xanuun. inbadan oo kamid ah bulshada ayaa ka cawda xaaladdaan, walow uu ku badanyahay dadka shaqeeya xiliyada ama waqtiga faraha badan, waxaana loo aanayn karaa fadhiga tirada badan ama fadhi la’aan waqti dheer ah.
Maxaa Sababa Dhabar Xanuunka?
Title: Waxyaabaha Keena Dhabar Xanuunka iyo side loo daweeya